Akụkọ Chris Benham na Martech Zone |
Edemede site na Chris Benham
Chris maara na a na -emepụta nnukwu ahịa site n'ige ndị ahịa gị ntị - ọ bụghị ikwu okwu na ha. O tinyela echiche a iji nyere aka bulie ọtụtụ ụlọ ọrụ n'ọkwá ahịa. Na -agba ahịa maka Alchemer na -enye Chris ohere na -enweghị atụ iji mepụta ahịa nke dabara ndị ahịa dabere na nzaghachi ha. Chris sonyeere Alchemer mgbe ọ nwesịrị ọrụ azụmaahịa na Symantec, Avast, Webroot, na Yellowfin BI. Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Kansas.
Nkuzi 3 sitere na ụlọ ọrụ ndị ahịa-etiti
Tuesday, August 10, 2021 Friday, February 11, 2022 Chris Benham
Ịnakọta nzaghachi ndị ahịa bụ nzọụkwụ mbụ doro anya n'inye ahụmịhe ndị ahịa kacha mma. Mana ọ bụ naanị nzọụkwụ mbụ. Enweghị ihe ọ bụla a ga -emezu ma ọ bụrụ na nzaghachi ahụ emee ụdị omume. Ọtụtụ mgbe a na -anakọta nzaghachi, achịkọta n'ime nchekwa data nke nzaghachi, nyochaa ka oge na -aga, ewepụta akụkọ, ma emesịa mee ngosi na -atụ aro mgbanwe. Ka ọ na -erule mgbe ahụ ndị ahịa nyere nzaghachi ahụ ekpebiela na ọ nweghị ihe a na -eme na ntinye ha wee nwee